Swarmify: Izizathu ezine zokungasebenzisi iVidiyo yeYouTube kwiWebhusayithi yeShishini lakho Martech Zone
Hlaziya: Izizathu ezine zokungasebenzisi iiVidiyo zeYouTube kwiWebhusayithi yakho yeShishini
NgeCawa, ngoMatshi 28, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 28, 2021 Douglas Karr
Ukuba inkampani yakho ineevidiyo zobungcali ochithe amawaka eedola kuzo, kuya kufuneka upapashe iividiyo kwiYouTube ukuze ufumane ithuba kwiziphumo zophendlo lukaYouTube…. qiniseka nje ukuba wena Lungiselela iYouTube yakho iividiyo xa usenza. Oko bekuthethile, akufuneki ungene kwiividiyo zeYouTube kwindawo yakho yokudibana… ngenxa yezizathu ezimbalwa:
I-YouTube ilandelela ukusetyenziswa kwezi vidiyo Intengiso ekujoliswe kuyo. Kutheni le nto ufuna ukwabelana ngeenjongo zabakhenkethi bakho noGoogle ukuze batyhalele intengiso kwabo bakhuphisana nabo?
Ngaphandle kokuba ulibale, mhlawumbi uyahamba iividiyo ezifanelekileyo zabakhuphisana nabo kwisidlali sakho seYouTube! Khawufane ucinge ngokundwendwela indawo yakho, ubukele ividiyo yakho, emva koko ividiyo yomntu okhuphisana naye iboniswa njengenye indlela efanelekileyo. Yhu!
Yikholwe okanye ungakholelwa, iYouTube yinyani icotha kakhulu kwaye iividiyo zihlala zingaqali kwaphela ngamanye amaxesha njengoko ividiyo ibhaqa. Hayi… isimahla, akunjalo? Ewe… hayi ishishini elizama ukuvala umthengi ayisiyiyo. Kukho iindleko zokukhawulezisa kwi-Intanethi.
Isidlali seVidiyo sikaYouTube asikho kakhulu ngokwezifiso… Qaphela le vidiyo ingezantsi apho ndinokukhetha khona ezimbalwa ... jonga kwiYouTube, cofa kwikhonkco ukuvula kwiYouTube, Bukela kamva kwiYouTube, Yabelana, okanye ucofe umdlalo. Yonke inophawu lweYouTube endaweni yophawu lwakho. Kutheni ingabi ngumdlali nje ongenaziphazamiso kwaye asebenze?
Kuya kufuneka ukuba ndikucebise ukuba uphephe ukubamba iividiyo kwindawo yakho. Umgcini wakho wewebhu oqhelekileyo akanaso isiseko sokuhambisa amandla kumawakawaka abatyeleli. Ngapha koko, kukho ithuba elihle lokuba uyaphula imingcele ethile yokukhuphela kwaye uhlawuliswe ngaphezulu. Ngokuqinisekileyo ufuna ukusingathwa kwevidiyo… hayi nje iYouTube.
Yima umzuzwana, uthi… Doug… wena rhoqo Shumeka iividiyo zeYouTube kwindawo yakho. Ewe, bantu, olu lupapasho ... hayi indawo yeshishini. Ngokwenene ndiyakuthanda ukushumeka iividiyo ezivela kuYouTube ukuze abadali bafumane iimbono ezongezelelweyo kunye namathuba abantu okubafumana kwaye babhalise kubo. Xa ndineevidiyo ezithile zobuchwephesha ezenzelwe ishishini lam, ngokuqinisekileyo ndiza kubabamba Shwabanisa.
Kukho, ewe, enye into eyahlukileyo… uyi-YouTuber!
Swarmify SmartVideo: Ukusingathwa kweVidiyo ngokukhawuleza
I-Swarmify ibonelela ngesisombululo esomeleleyo nesikhawulezayo sokubamba ividiyo kwiwebhusayithi yakho. Nantsi imbonakalo yevidiyo:
Shwabanisa inikeza ezinye izinto ezintle:
CDN -Banehlabathi yomxholo wenethiwekhi (CDN), Oko kuthetha ukuba kuncinci kakhulu ukubambezeleka phakathi komntu ocela ividiyo kunye nendawo ehanjiswa kuyo.
Ukudlala kwakhona kwiBuff-Free -I-SmartVideo isebenzisa isisombululo sika-Swarmify sokulinda isisombululo, kunciphisa kakhulu ukuphuma kwevenkile nge-8x.
Ukusebenza ngokuqhubekayo kweVidiyo Ngalo lonke ixesha lokudlala, i-SmartVideo iyaqhubeka nokubeka iliso kumava omsebenzisi ngamnye kunye nokuthintela ukusilela ngaphambi kokuba kwenzeke.
Ukufakwa Kwekhowudi Kwisixhobo -Abakhenkethi bafumana ividiyo elungiselelwe isixhobo sabo ukuhambisa olona luvo lubalaseleyo. Ukukhathazeka-ngaphandle kokuhlaziywa ngokuzenzekelayo kwezixhobo ezintsha.
Ucocekile, uMdlali oDinayo oSimahla -Thengisa ngakumbi, kwaye unciphise amaxabiso okugcina ngokugcina iindwendwe zijolise kuhlobo lwakho. Iimpawu ezinkulu kunye nevidiyo ezinxulumene noko ziyilelwe ukuba zisuse abathengi bakho.
Plugin WordPress -Akukho mfuneko yokungcungcutheka ujikeleze neskripthi kunye nokushumeka, iSmartVideo ine-plugin yokufumana ukuba usebenze ngokulula.
namaxabiso -Akufanele wohlwaywe ngokukhonza umxholo okwinqanaba eliphezulu kwindawo yakho. Kungenxa yoko le nto ukuhlawulwa kweSmartVideo kungasekelwanga kububanzi bebhendi, kukujonga kuphela ividiyo.
Nalu ulwahlulo-ngecala lokuthelekisa isantya:
Ukuba ayonelanga, iSmartVideo izithathela ngokuzenzekelayo iividiyo zakho kwiYouTube, iyikhowudi kwaye iyigcine. Emva koko, umdlali weYouTube ubuyiselwe ngokupheleleyo kwaye iividiyo zakho zisingathwa kuthungelwano lokuhanjiswa kwehlabathi kwaye zenziwa ngetekhnoloji yokudlala ekhawulezayo.
Ukubhengezwa: Ndililungu le Yongeza iSmartVideo.
tags: ukufundisisaukubamba ividiyo kwishishiniukubamba ividiyo ngokudibeneyoukusingathwa kwevidiyo ngokukhawulezaimvideobhuqaividiyo cdnikhowudi yevidiyoumgcini wevidiyoyokubamba ividiyoiplagi yamagamaEnye indlela yeYouTube
Isebenza Njani Intengiso? Yintoni Ebangela Abantu Bathenge?